भोली चैत्र ४ गते सोमबार तपाईको भाग्यफल कस्तो छ ? थाहा पाउनुस – Jaljala Online
भोली मिति २०७६ साल चैत्र महिनाको ४ गते मंगलबार रहेको छ । अंग्रेजी पात्रोअनुसार २०२० मार्च १७ तारिख रहेको छ । मेष-तपाईंका परिवारले तपाईंबाट धेरै आशा गर्दछन् जसले गर्दा तपाईंलाई रीस उठ्न सक्छ। आर्थिक सुधार निश्चित छ। आफ्नो परिवारलाई उचित समय दिनुहोस्। तिनीहरूलाई तपाईंले ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने महसुस गराउनुहोस्। तिनीहरूसँग आफ्नो गुणस्तरको समय बिताउनुहोस्। गुनासो गर्ने कुनै पनि मौका नदिनुहोस्। तपाईंको उपस्थितिले तपाईंको प्रियलाई यो संसार बस्ने योग्य स्थान बनेको छ। व्याङ्किङ्ग क्षेत्रका पेशावरहरूलाई राम्रो समाचार प्राप्त हुनेछ। कसैको लागि कार्डमा पदोन्नतिको सम्भावना ऊँचो छ। आनन्दलाई दुइ गुणा बढाउन तपाईंले सहकर्मीसँग आफ्नो खुशी बाँट्न सक्नुहुन्छ। आज, तपाईंले आफ्नो जोडीसित आफ्नो जीवनको सबैभन्दा राम्रो समय बिताउनु हुनेछ।
कन्या-स्वास्थ्य पूर्णत ठीक रहनेछ। परिवारका सदस्यहरूसँग केही तनाउमुक्त समय बिताउनुहोस्। प्रेम परमेश्वरको उपासना गरेजस्तै हो; यो धेरै धार्मिक हो साथै आध्यात्मिक पनि हो। तपाईंलाई यो आज थाहा हुनेछ। तपाईंसे आज काममा एउटा अचम्मको व्यक्ति भेट्न सक्नु हुनेछ। तपाईंको जोडी प्रेमको परमानन्दले तपाईंलाई अचम्म दिने मुडमा छन्; उनलाई मद्दत गर्नुहोस्। तुला-तपाईंले आफ्नो शारीरिक शक्ति कायम राख्न खेलमा आफ्नो समय बिताउने सम्भावना छ। परिवारका सदस्यहरूले तपाईंको जीवनमा एउटा विशेष ठाउँ ओगट्नेछन्। सपनाको चिन्ता छोडेर आफ्नो रोमान्टिक साथीसँग आनन्द मनाउनुहोस्। महत्वपूर्ण मान्छेसँग अन्तरक्रिया गर्नाले तपाईंलाई राम्रो विचार र योजना ल्याउनेछ। गफ र अफवाहहरुबाट टाढा रहनुहोस्। आज, तपाईंले आफ्नो जोडीसित आफ्नो जीवनको सबैभन्दा राम्रो समय बिताउनु हुनेछ।
वृश्चिक-च्चाहरुले तपाईंको साँझ रमाइलो पार्नेछन्। नीरस र व्यस्त दिनलाई बिदा गर्न एउटा राम्रो खाने योजना गर्नुहोस्। उनीहरूको भेलाले तपाईंको शरीरलाई पुन ऊर्जा दिनेछ। बन्धन र जोडिनुसँग सम्बन्धको नवीकरणको लागि सही दिन। तपाईंको मुस्कान आफ्नो प्रियको दुख निवारणको सबैभन्दा राम्रो औषघि हो। सबै कुराहरू नपढीकन कुनै पनि व्यापार / कानुनी कागजातमा हस्ताक्षर नगर्नुहोस्। आफ्नो जीवनमा आज विवाह सर्वश्रेष्ठ स्थानमा पुग्नेछ। धनु -ज स्वास्थ्य ठीक हुनेछ। साथीहरूसँगका गतिविधिहरु रमाइला हुनेछन् – तर खर्च नगर्नुहोस् – अन्यथा तपाईं खाली हात घर पुग्नु हुनेछ। तपाईंले आफ्नो प्रेमीको एउटा नयाँ अद्भुत पक्ष देख्न पाउनु हुनेछ। तपाईंको नयाँ योजना र उद्यमको बारेमा भागीदारहरू उत्साहित हुनेछन्। वैवाहिक जीवनले धेरै लाभबरू संगै लिएर आउँछ, र तपाईंले आज ती सबैको अनुभव गर्नु हुनेछ।
कुंभ-धेरै त्रसित धटनाहरूले तपाईंको प्रतिरोध गर्ने र सोच्ने शक्ति कमजोर गराउँछ। सकारात्मक सोच लिएर रोग विरुद्ध लड्नुहोस्। केही अतिरिक्त पैसा बनाउन आफ्नो नवीन विचार प्रयोग गर्नुहोस्। परिवारका सदस्य वा जोडीले केही खिचलो निकाल्नेछन्। तपाईंको प्रेम नयाँ उचाइमा पुग्नेछ। आजको दिन आफ्नो प्रेमको मुस्कानबाट सुरु हुनेछ, र एक-अर्काको सपनामा अन्त हुनेछ। आज तपाईंले गरेका सबै कामका मेहनतको भुक्तानी हुनेछ। गफ र अफवाहहरुबाट टाढा रहनुहोस्। आजभोली तपाईं र तपाईंको जोडी धेरै खुसी हुनु हुँदैन भने, तपाईं आज पागल रमाइलो गर्न जानु हुँदैछ। मीन-भाग्यमा निर्भर नहुनुहोस, आफ्नो स्वास्थ्य सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोस् किनकि भाग्यवान् अल्छी देवी हो। परिवारका सदस्यहरूसँग मतभेदमा विजयी भएर – तपाईं सजिलै आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्नु हुनेछ। कसैले विदेशी समाचार र व्यापारको भेट पनि पाउन सक्नेछन्। आफ्ना जीवनसाथीसँग बिताएका दिनहरू सामान्य दिनभन्दा राम्रा जस्तो देखिन्छन्।
Posted on February 26, 2020 Author Jaljala Online
आज २०७६ फागुन १४ गते बुधबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ- मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ सामाजिक कार्यबाट प्रसिद्धि कमाइने […]
साउन ३, काठमाडौं । व्यवसाय, रोजगारी वा कुनै आयआर्जन गरेपछि राज्यका हरेक नागरिकले सरकारलाई कुनै न कुनै रूपमा कर बुझाउनैपर्छ। जानाजान वा अन्जानमा तपाईंले कर नबुझाए सरकारी कारबाही तथा जरिवानामा पर्न सक्नुहुन्छ। सरकारले पनि हरेक वर्ष व्यक्तिले गर्ने आयआर्जनमा लिने करको दायरा फरक गरिरहेको हुन्छ। व्यक्तिको आयआर्जन कर पनि राज्यले विभिन्न तवरबाट संकलन गर्दै आएको […]